အဘယ်ကြောင့် Facebook နှင့် Instagram ကိုပုံပြင်နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆို? - Teles Relay
Teranga Gold ကို ၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့် Naguib Sawiris သည်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာသည်။
DRC မှစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှု (၅/၅) - ၀ ီဇလ်နှင့်အတူ Ken Kakena သည်သင်တန်းတက်သည်။
လူမှုကွန်ယက်များသည်သင်၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသင်ကောင်းစွာသတိပြုမိခဲ့သော်လည်းသင်စွန့်ပစ်လိုက်သလား။ စိတ်မပူပါနဲ့၊ အင်တာနက်အသုံးပြုသူများအကြိုက်ဆုံးပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်အလွန်လူကြိုက်များတဲ့ Instagram / Facebook ဇာတ်လမ်းကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့သင်ကြားပေးပါမည်။
"ပုံပြင်" သည်တိုတိုတုတ်တုတ်ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုများဖန်တီးရန်၊ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်နှင့် Instagram သို့မဟုတ် Facebook တွင်သင်၏အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ထိတွေ့ရန်အခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာသော Snapchat မှ“ ချေးယူလိုက်သော” လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပုံများကဗီဒီယိုနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုအနည်းဆုံး ၅ စက္ကန့်မှ ၁၅ စက္ကန့်အထိမိုဘိုင်း format ဖြင့်မျှဝေနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် ၂၄ နာရီသက်တမ်းရှိပြီးထိုအချိန်ကာလအတွင်း၌သာမြင်နိုင်သည်။ သင်၏ပုံသဏ္theာန်ကိုရှေ့စာမျက်နှာတွင်တင်ထားသည့် "Highlight" ၏ကျေးဇူးကြောင့်သူတို့၏မြင်သာမှုကိုတိုးချဲ့နိုင်သည်။ ဒီဇာတ်လမ်းကအဓိကအချက်ကိုသွားခြင်းရဲ့အားသာချက်ပဲ။ ယူဆောင်လာသည့်မက်ဆေ့ခ်ျသည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိသည်။
တစ် ဦး စေ့စပ်အသိုင်းအဝိုင်းတည်ဆောက်ခြင်း
ကုန်ပစ္စည်းများသည်ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ကုမ္ပဏီများအတွက် ၄ င်းတို့၏စားသုံးသူများနှင့်အတူဆက်သွယ်မှုကိုလိုလားတောင့်တ။ ၎င်းတို့ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန် (သို့) လူသိများစေရန်အတွက်အလွန်အစွမ်းထက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ယင်းအပေါ် Facebook က Je Wanda ရဲ့ပျမ်းမျှစံချိန်ကိုတင်တယ် 70.000 ထူးခြားတဲ့အဖွင့် လစဉ်နှင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 25% interaction က။
Facebook / Instagram Story ကိုရောင်းချမည် အောက်တိုဘာလ 20 မှ 31 :
15 €အစား€ 25
FCFA အစား 10.000 FCFA အစား 15.000
Momo, OM, Paypal နှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်ငွေပေးချေခြင်း။
ပုံပြင်များအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက၎င်းအလတ်စားကို၎င်းမှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ခြင်းတွင်အသုံးပြုရန်စိတ်ဝင်စားမှု ငါ Wanda အကယ်ဒမီ.
အင်တာနက်ကြော်ငြာခြင်းအကြောင်းပိုမိုသိလိုပါကလာမည့်လာမည့်လေ့ကျင့်ရေးအတွက်အခမဲ့ကြိုတင်စာရင်းသွင်းပါ HERE ကိုနှိပ်ပါ.
ဤဆောင်းပါးသည် https://www.jewanda.com/2020/10/pourquoi-communiquer-avec-une-story-facebook-instagram/ တွင်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်
ဆရာဟောင်း Francis Ngannou ၏သင်တန်းဆရာဟောင်းကသူ၏အတ္ထုပတ္တိပြနာနှင့် ပတ်သက်၍ သူသည်ကျေးဇူးကန်းသူဖြစ်သည်!
ကော်လိုရာဒိုတွင်တောမီးကြီးထွားခြင်း - New York Times
စီးပွားရေးပြန်လည်နာလန်ထူ - မော်ရိုကိုဟာအယ်လ်ဂျီးရီးယားနဲ့တူနီးရှားထက်ပိုကောင်းသလား။ - လူငယ်
Teranga Gold ကိုဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့် Naguib Sawiris သည်လန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာသည်။
DRC မှစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှု (၅/၅) - Wizall နှင့်အတူ Ken Kakena သည်ဘဏ္forာရေးအတွက်သင်တန်းပေးသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ - ဂျာမနီရှိကင်မရွန်းနိုင်ငံရှိ VRP တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု